EPL - Sports myanamr - Page 5
အာတီတာ ကို ကယ်တင်ခဲ့တဲ့ အော်ဘာမီယန်း ၊ အာဆင်နယ် ၁-၀ နောဝှစ်ချ် စီးတီး ပွဲမှ ထူးထူးခြားခြား ပြောစရာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အချက် ၅ ချက်
ပရီးမီးယားလိဂ် အဖွင့် ၃ ပွဲဆက် ရှုံးပွဲ ကြုံတွေ့ထားတဲ့ အာဆင်နယ် အသင်းဟာ ပွဲစဉ် (၄) မှာတော့ အော်ဘာမီယန်း ရဲ့ သွင်းဂိုး နဲ့ အတူ ပထမဆုံး နိုင်ပွဲ ၊ သွင်းဂိုး ရရှိ သွားခဲ့ပါတယ် ။ အာဆင်နယ် အသင်းဟာ နောဝှစ်ချ် ကို အနိုင်ရတာကြောင့် အဆင့် ၁၆ …
Man of the Match ခြေစွမ်းပြခဲ့တဲ့ ရိုနယ်ဒို နဲ့ နယူးကာဆယ် ပွဲက သရဲနီ တို့ရဲ့ Rating များ
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ဟာ ဒီကနေ့ ပွဲမှာ ၄-၂-၃-၁ နဲ့ ပွဲထွက် လာခဲ့ပြီး နောက်တန်း မှာ ဘစ်ဆာကာ ၊ မက်ဂွဲယား ၊ ဗာရန်း နဲ့ လုခ်ရှော တို့ ပါဝင် လာခဲ့ကြပါတယ် ။ ကွင်းလယ် မှာတော့ မာတစ် နဲ့ ပေါ့ဘာ တို့ကို ဆိုးရှား နေရာချ …
ကမ္ဘာ့ဘောလုံး အဖွဲ့ချုပ် ဖီဖာ ဟာ ဘရာဇီး ၊ မက္ကဆီကို ၊ ချီလီ ၊ ပါရာဂွိုင်း ဘောလုံး အဖွဲ့ချုပ် တွေ နဲ့ ညှိနှိုင်း ပြောဆို အပြီး မှာတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာ နိုင်ငံတကာ ရက်သတ္တပတ် အတွင်း လက်ရွေးစင် အသင်းရဲ့ ဆင့်ခေါ်မှု ကို ငြင်းဆန် ခဲ့တဲ့ …
ယခုအပတ် ကစားမယ့် ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ် ၄ အတွက် ခန့်မှန်းချက်များ
နိုင်ငံ တကာ ပွဲစဉ်တွေ ပြီးဆုံး သွားချိန် မှာတော့ ကလပ်ပွဲစဉ်တွေ ပြန်လည် ရောက်ရှိလို့ လာခဲ့ပါပြီ ။ ဒီတပတ် မှာတော့ ခရစ္စတီယာနို ရိုနယ်ဒို ရဲ့ အိုးထရက်ဖိုဒ့် တကျော့ပြန် ခရီးနဲ့ အတူ စိတ်ဝင်စား စရာ ပွဲစဉ်တွေ ပါဝင်လာခဲ့ ပါတယ် ။ နိုင်ငံ ပွဲတွေ ပြီးလို့ ပြန်စတဲ့ …
September 10, 2021 - by Editor
EPL / News / Serie A
ပရီးမီးယားလိဂ် ကလပ် အသင်းတွေဟာ အမေရိက ဘောလုံး အဖွဲ့ချုပ်တွေ ရဲ့ ၅ ရက် ပွဲပယ် အပြစ်ဒဏ် ကို လက်ခံ ခဲ့တာကြောင့် ဒီတပတ် ပရီးမီးယားလိဂ် မှာ ကစားသမား ၁၀ ယောက်ဟာ ပါဝင် ကစား နိုင်ကြ တော့မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ သိရ ပါတယ် ။ အဲ့ဒိ …
ဂျာစီရောင်းရုံနဲ့ ရိုနယ်ဒို အတွက် အရင်းကြေသွားခဲ့တဲ့ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်
ကစားသမား တယောက် ရဲ့ ပြောင်းရွှေ့ကြေး ကို သူ့ရဲ့ ဂျာစီ ရောင်းအားနဲ့ အရင်းကြေ နိုင်သလား ? လုံး၀ မဖြစ်နိုင် သလောက်ပါပဲ ။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ ဂျာစီ ရောင်းရငွေ ရဲ့ ရာခိုင်နှုန်း အများစု ကို ဂျာစီ ထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီ တွေက ရရှိ ကြတာပါ …
ယူနိုက်တက်ဆီ ပြန်လာဖို့ ဘယ်သူတွေ ကူညီပေးခဲ့သလဲ ဆိုတာ ဖွင့်ဟရင်း ပရိသတ်တွေ ကြားချင်နေတဲ့ စကားကို ပြောလိုက်တဲ့ ရော်နယ်ဒို
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်းရဲ့ ကစားသမားသစ် ဖြစ်လာခဲ့သူ ခရစ္စတီယာနို ရော်နယ်ဒိုက အိုးလ် ထရပ်ဖို့ဒ် အခြေစိုက် ပြန်လာဖို့အတွက် အသင်းဖော်ဟောင်းတွေရဲ့ အရေးပါခဲ့ပုံကို ထုတ်ဖော်ပြောကြား သွားခဲ့လိုက်ပါတယ် ။ ရော်နယ်ဒိုဟာ မန်ချက်စတာမှ ထွက်ခွာပြီးနောက် 12နှစ် အကြာမှ အသင်းဟောင်းဆီ ပြန်ရောက်လာနိုင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး ယူရို 15 သန်း (+ ယူရို 8သန်း) …
ဖာရန်တောရက်စ် ဟာ မန်စီးတီး ရဲ့ No.9 နေရာကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင် မလား ?
၂ ပွဲဆက်တိုက် ၅ ဂိုး သွင်းယူ အပြီးမှာတော့ ဒီရာသီ ပရီးမီးယားလိဂ် မှာ ပက် ဂွာဒီယိုလာ ရဲ့ မန်ချက်စတာ စီးတီးဟာ ဂိုးသွင်း အများဆုံး ဖြစ်လာခဲ့ ပါတယ် ။ ဂွာဒီယိုလာ ဟာ နွေရာသီ အပြောင်း အရွှေ့ မှာ အထောင် တိုက်စစ်မှူး စစ်စစ် တယောက် ကို …
အာဂျင်တီးနား တိုက်စစ်မှူး လီယွန်နယ် မက်ဆီ ဟာ ဒီကနေ့ နံနက်ပိုင်း မှာ ကစားခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာ့ဖလား ခြေစစ်ပွဲ မှာ အသင်း အတွက် ဟက်ထရစ် သွင်းယူ ပေးခဲ့ ပါတယ် ။ ဒီဂိုးတွေ ဟာ မက်ဆီ ကို နိုင်ငံ အသင်း အတွက် သွင်းဂိုး ၇၉ ဂိုးအထိ ရောက်ရှိ …